Is that OK for2hostings 1 site ??? — MYSTERY ZILLION
Is that OK for2hostings 1 site ???
ကျွန်တော် social networking site တစ်ခုထောင်ချင်လို ့ပါ ning တွေက july မှာပိတ်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့free hosting ( payment နဲ ့ကတော့ အဆင်မပြေလို ့ပါ) တစ်ခုယူပြီးတော့လုပ်ချင်ပါတယ် ဘယ် CMS ကိုသုံးရင် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲမသိဘူးခင်ဗျ ကျွန်တော်စိတ်ထင် social ဆိုဒ်ဆိုတဲ့အတိုင်း storage ကလောက်မယ်မထင်လို့hosting နှစ်ခု ဆိုဒ်တစ်ခုပုံစံသွားဖို ့စဉ်းစားထားပါတယ် ပိုကောင်းတဲ့အကြံညဏ်တွေရှိရင်လေးပေးကြပါ
free hosting not recommend for social network. You can try buddypress with wordpress.
is using buddypress
storage များများရတဲ့ free hosting အနေနဲ့တော့ ကျွန်တော် zoka.cc ကို ညွှန်းပါရစေ။
နောက်ပြီး သူရဲ့ ဖရီး ပေးထားတဲ့ အခြေအနေကို အောက်ကလင့်မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဖရီးပေးတဲ့ hosting တွေမှာ သူက stroage အများဆုံးပါ။